astanta kacsiga dumarka - iftineducation.com
iftineducation.com – Galmada sharciga ahi kaliya maahan hab markaasi lagu ilaaliyo xiriirka ka dhaxeeya labada lamaane oo qura, lakiin waxaa sidoo kale laga hela galmada faa’iidooyin markaasi la xiriira Cafimaad isla markaana aad muhiim ugu ah nolosha aadanaha.
2. GALMADU WAXEY YAREEYSA WELWELKA. Welwelka faraha badan ayaa wuxuu noqon kara sabab keenta markaasi cuduro ku dhaca jirka, tusaale ahaan Cudurka Karka Dhiigga iyo Jawaab celinta difaaca jirka oo hoos u dhacda ayaa dhamaantooduba waxey yihiin cuduro markaasi laga qaado welwelka faraha badan, sidaasi darteed ayaa waxaa muhiim ah mar walba in aad heerka welwelkaada aad yareyso si markaasi aad u hesho nolol aan dhibaatooyin badneyn. Haddaba waxaa cilmi baaris la sameeyay lagu soo ogaaday in galmada iyo marxabeenta dhacda kadib ay wax xooga hoos u dhigaan heerka karka dhiigga, isla markaana ay qofka u fududeeyaaan in markaasi uu yareeyo Welwelka heysta, sidoo kale ayaa waxaa la sheega in galmadu ay aad usii qoto dheereyso xiriirka u dhexeeya labada lamaane iyo sida qofba qofka kale uu uga bixin karo sharaxaad la xiriirta markaasi nafsadooda.
3- Haddii aad tahay qof cayilan misaanka jirkiisuna uuna dheeli tirneeyn ogow mar walba waxaa qatar ugu jirtaa in ay kugu dhacaan dhibaatooyin cafimaad. Waxaa mar walba talo lagu bixiyaa in uu qofku la socdo misaanka jirkiisa iyo sida uu la jaan qaadi karo dherarkiisa, inta badan dadka ku nool maanta aduunka waxey aad uga cawdaan culeeyska jirkooda oo aad u badan, haddaba haddii aad doneysid in aad arintaas u hesho xal jawaabtu waxey mar walba taala albaabka gurigaada iyo sariirtaada.
Qoys is qaba oo ku wada nool farxadna waxaa aad u yar mar walba in ay hormariyaan ama ay ku dhacaan cudurada Kansarka iyo kuwa ku dhaca wadnaha. Jirka Banii’aadamku wuxuu mar walba soo saaraya dhecaano kala duwan kuwaas oo qeyb ka qaata horumarka xiriirka jaceyl ee ka dhexeeya lamaanaha mar kasta oo ay sameeyaan galmo, midka ugu muhiimsan dheecaanadaasina waxaa loo yaqaan Oxytocin waxaana lagu Naaneysa dhecaanka Jaceylka , Dhecaankaan maskaxda laga soo sii daayo ayaa wuxuu aad u dhaliyaa dareen xiriir wanaag oo dhex mara labada lamaane ee markaasi isu galmoonaya, dhecaankaan ayaa waxaa laga soo sii daaya qeyb markaasi ka tirsan Maskaxda marka labada.
Sheeko galmo oo kacsi leh